Thanos မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
01 / 10 / 2021 01 / 10 / 2021 ခရစ် Wharfe 105 Views စာ0မှတ်ချက် 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, 76187 အဆိပ်, ၇၆၁၉၁ Infinity Gauntlet, ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, 76199 သတ်ဖြတ်ခြင်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Black ကမုဆိုးမ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego Spider-Man, Lego စူပါမာရီယို, Marvel, Spider-Man, စူပါမာရီယို, Thanos, Thor, Zavvi
01 / 09 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 237 Views စာ0မှတ်ချက် 41690 Friends ထွန်းပြက္ခဒိန်, 60603 CITY ထွန်းပြက္ခဒိန်, 75307 Star Wars ထွန်းပြက္ခဒိန်, ၇၆၁၉၆ The Avengers Advent Calendar, 76390 ဟယ်ရီပေါ်တာထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်း, ထွန်းပြက္ခဒိန်, ထွန်းပြက္ခဒိန်, Avengers, Black ကမုဆိုးမ, ကပ္ပတိန် Marvel, City, Friends, ဟယ်ရီပေါ်တာ, သံမဏိလူသား, Lego, Lego CIty, Lego Friends, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego မှ marvel, Lego Star Wars, Marvel, နစ်ခ် Fury, Spider-Man, Star Wars, Thanos, Thor, တိုနီ Stark
30 / 08 / 2021 30 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 270 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Gamora, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, သေးသေးလေး, စတား-သခင်ဘုရား, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
29 / 08 / 2021 29 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 240 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Black က Panther, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒိုမီလာဂျေ, Kraglin, Lego, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Marvel, အသေးစား, သေးသေးလေး, Nebula, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, Wakanda, Yondu
18 / 08 / 2021 19 / 08 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 198 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, ၇၁၇၄၁ Ninjago City ဥယျာဉ်, 76020 Knowhere Escape မစ်ရှင်, 76079 Ravager တိုက်ခိုက်မှု, 76080, 76080 Ayesha ရဲ့လက်စားချေ, 76131 သေစားသေစေသော Compound တိုက်ပွဲ, 76192 Avengers: နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုတ်ခဲ, နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy ၏အုပ်ထိန်းသူများ, က Galaxy Vol ၏အုပ်ထိန်းသူများ။ 2, Heist, Lego, Lego Avengers Endgame, Lego မှ marvel, Marvel, Nebula, Peter Quill, စတား-သခင်ဘုရား, မျက်နှာစာ, Thanos, T'Challa စတား - Lord, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, Yondu
20 / 07 / 2021 20 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 450 Views စာ0မှတ်ချက် 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Gamora, Instagram ကို, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego Minifigures, Lego ကောလာဟလများ, Marvel, သေးသေးလေး, ကောလာဟလာ, ဆမ် Wilson, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
09 / 07 / 2021 09 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 966 Views စာ0မှတ်ချက် 76178 နေ့စဉ် Bugle, Avengers, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ကောလာဟလများ, Lego Spider-Man, Loki, Marvel, Peter Quill, ကောလာဟလာ, Scarlet စုန်းမ, Spider-Man, ကြယ်စင်သခင်, Sylvie, Thanos, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ LEGO Group, Throg, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, အဖြူရောင်အမြင်